မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: မဲတပွားအတှကျ ဆီထမငျး
ှSis ရေ အဲ့နေ့က တတယ့် အူတိ အူကြောင်ဖြစ်သွားတယ် ဆောရီးပါနော်.. မထင်မှတ်ပဲ ဆုံလိုက်ရတာ ...၀မ်းလည်းသာတယ် ဘာပြောရမှန်းမသိဖြစ်သွားတာ... ကိုယ့်အားနည်းချက်က အဲ့တာပဲ ချက်ချင်းမတုန့်ပြန်တာ နှေးတာ.. တကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်.. နောက်တခါတွေ့ရင်တော့ စကားတွေ အများကြီးပြောပြီနော်.. ဒီကသောကြာသူပါ.. :)
10/20/2015 9:49 AM
@TZN - ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းက သူငယ်ချင်းတွေကို ဟိုးအရင်က အပြင်မှာတွေ့ရင်လဲ အဲလိုကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားတယ်။ ရုတ်တရက်ကြီးဆိုတော့ ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲ မေ့သွားတာမျိုး။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါက အွန်လိုင်းလိုပဲ စိတ်ထဲထားပြီး ပြောဆိုလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒါ TZN မှာ မဟုတ်ဘူး အားလုံးဖြစ်တယ်။ တချို့ဆို အချိန်တော်တော်ကြာတဲ့အထိတောင် ပုံစံက မပြောင်းဘူး။ တချို့ကျတော့ အွန်လိုင်းမှာ စကားပြောလို့ကောင်းပြီး အပြင်မှာလုံးဝ မပွင့်မလင်းသလိုလို ကြီးကျယ်သလိုလိုရှိတယ်။ ပုံစံ ၂မျိုး လုံးလုံးကွဲတာလဲ ရှိတယ်။ မဗေဒါက အခုလို တွေ့နေတာ များနေလို့ ပုံမှန်ဖြစ်နေတာ။ တစ်ခါတစ်လေရှိသေးတယ်။ ကိုယ်က အွန်လိုင်းကအတိုင်းသွားဆက်ဆံလိုက်လို့ ကိုယ့်ကို ငပေါမကြီးဆိုပြီး အထင်သေးသွားတာမျိုး။ အစကတော့ စာတွေလာဖတ်ပြီး လူလဲတွေ့ရော ဟင်ကနဲ ဖြစ်သွားတာမျိုးတွေ... ခိခိ... စာရေးသူနဲ့ သူရေးတဲ့စာကို ခွဲခြားမမြင်နိုင်ကြဘူးလေ။ ဒါကြောင့် မဗေဒါဆို အရမ်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ မရေးရဲဘူး။ ကိုယ့်ကို သိပ်အထင်ကြီးနေမှာစိုးလို့။ ဒါတောင် ခရီးတွေနိုင်ငံအများကြီးကိုသွားနေတဲ့သူဆိုတော့ သူတို့လဲ နိုင်ငံခြားသွားချင်လို့ ကူညီပါဆိုတာမျိုး။ ဓာတ်ပုံပို့ပြီး ဒါဘယ်နိုင်ငံမှာ ရိုက်ထားတာလဲပြောဆိုပြီး အထူးတလည် ဥာဏ်လာစမ်းတာမျိုး ခံရဖူးသေးတာ... ခိခိ...
10/20/2015 10:16 AM
ဖတ်ရတာ ကိုယ်တောင် စားလိုက်ရသလို ခံစားရတယ် ဗေဒါလေးရေ
အမြဲတမ်း လှူ နိုင် တန်း နိုင်ပါစေနော်
10/20/2015 10:50 AM
ပြည့်ဝသန့်ရှင်းတဲ့စေတနာတွေအတွက် လှိုက်လှဲဝမ်းသာ သာဓုခေါ်ပါတယ်ရှင်...။ နန်းတို့လည်း ဘယ်လိုမဲပေးရမယ်မသိသေးပါဘူးလေ။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ မြန်မာ လေးသန်းကျော်ရှိပေမဲ့ ကြိုတင်မဲပေးနိုင်တဲ့စာရင်းက ရာဂဏန်းဆိုလား ထောင်ဂဏန်းဆိုလားပဲရှိသတဲ့။ ပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံမှာက အခြေခံအလုပ်သမားတွေပဲများတော့ သိပ်ပြီးစိတ်မဝင်စားကြဘူး။ ဘယ်သူကမှ အလုပ်ပျက်ခံ၊ လမ်းစရိတ်အကုန်ခံပြီး မြန်မာပြည်ပြန်ပြီး မဲပေးချင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ ဝမ်းနည်းစရာပဲ။
10/20/2015 2:43 PM
အပေါ်က နှစ်ပိုဒ်ပဲ ဖတ်လို့ရတယ်။ နောက်ပိုင်းတွေ ဖောင့်တွေ ဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ့် ဘရောက်ဇာကြောင့်လား၊ မဗေဒါများ ယူနီကုဒ်နဲ့ ရေးထားတာလား မသိဘူး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆီထမင်းဝေနေတဲ့အကြောင်း ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ဖတ်ပြီး ၊ ကြည့်ပြီး၊ အားကျပြီးသားမို့ စာတွေ မမြင်ရလည်း အားကျတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အသိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဟိ။ ဗူးလေးတွေထဲ မထည့်ခင် ဆီစုပ်စက္ကူလေးခံတာ ဘယ်သူ့စိတ်ကူးလဲဟင်။ တော်တော်သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိတာပဲ။
10/20/2015 3:44 PM
အန်တီဝေရေ... လာအားပေးလို့ ကျေးဇူးပါ.... ခုလို ကိုယ်မသိတဲ့လူတွေကို ဘာမှ မမျှော်ကိုးပဲ လှူရတာကို သဘောကျတယ်။ ကြည်နူးတယ်။ အဲ့ဒိ စိတ်က ကိုယ်ပြန်ရလိုက်တာလို့ မှတ်တယ်။ နုိုဝင်ဘာ ရန်ကုန်ပြန်လာရင် မိဘမဲ့ကျောင်းမှာ အလှူလုပ်ဖို့ရှိသေးတယ်။
နန်းရွှေမှုံ ... ခု ထိုင်းမှာလဲ စမဲပေးနေရပြီဟုတ်? ဖေ့ဘွတ်ပေါ်မှာတွေ့တယ်... စလုံးလိုပဲ လိမ်ညာ မဲပျောက်တွေရှိပါတယ်။ အမှန်တော့ စလုံးလိုပဲ ဗွီဒီယိုတွေ တင်သင့်တယ်။ ဒါမှ အားလုံးသိမှာ...
ငြိမ်းမိန်းကလေး ... မဗေဒါ ဘလော့က ပိုစ့်တွေက အားလုံး ယူနီကုတ်ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ... ဒါပေမဲ့ အားလုံးဖတ်ရအောင် လုပ်ပေးထားတယ်... ဇော်ဂျီမရှိတဲ့ ကွန်ပြူတာတွေဆို တန်းပြီးတော့တောင် ဖတ်လို့ရတယ်။ စာမမြင်ရတာက backend မှာ code မထည့်မိလို့။ ခုတော့ မြင်ရလောက်ပြီ။ ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့ကတည်းက ဆိုတော့ သူများတွေ ရှယ်တာတွေ့တာလား။ မဗေဒါကို follow ထားတာလား။ friend add ထားတာလားဟင်?
10/20/2015 9:02 PM
lay sarr par dae ma baydar
10/22/2015 5:43 AM
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မဗေဒါ၇ယ်..။
မအားဘူးဖြစ်နေလို့စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါဘူး ။ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါတဲ့မဗေဒါကိုတကယ်အားကျတယ်..။ ဒီထက်အများကြီးလှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေနော် ။
ဖေ့ဘုတ် deactivate လုပ်ထားလို့ နောက်လမှပြန်လာမယ်နော်..။း)